ललिता निवासमा बैंकको ऋण र शेयर बजार
बैंकहरूले प्रोभिजन राख्दा नाफामा असर
पूँजीबजार कमजोर अवस्थामा रहेको बेला, अर्थमन्त्रीलाई पूँजीबजारतिर ध्यान नदिएको भनेर लगानीकर्ताले आक्षेप लगाइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ब्याजदरमा कमी ल्याउन सकिरहेको थिएन । बैंक ब्याजदर उच्च भएकै कारण लगानीकर्ताले पूँजीबजारमा लगानी गर्नुभन्दा बैंकमा निक्षेप राख्नु फाइदाजनक भएको बताएका थिए । नयाँ लगानीकर्ताले आशा गरे अनुरूप नेप्से नबढ्दा निकै निराश भई सीमित घाटामै रहेर शेयर बेचेका थिए । यसले गर्दा आपूर्ति धेरै हुन गई नेप्से झन् ओह्रालो लागेको थियो ।
बजारलाई स्वतन्त्र नै छोड्नुपर्दछ । कम्पनीहरूको कमाइ अनुसार बजार आफै बढ्छ । कसैले प्रचारबाजी गर्नु जरुरी छ र ?
केही ठूला लगानीकर्ताले सोझा लगानीकर्तालाई भ्रम छर्ने काम गरी नेप्से अब ६ महीनाभित्र ४ हजार पुग्ने दाबी गर्दै फेसबुकबाट प्रचार गरे । अनुभव नभएका लगानीकर्ताहरू यसैबाट प्रभावित भई लगानी गरे । बजार दोहोरो अंकले बढेको पनि देखियो । बढेको दिन २ अर्बभन्दा बढीको कारोबार भयो । तर त्यो दोहोरो अंक बढेको दुई दिन पनि टिक्न मुश्किल हुने गरेको छ । त्यसपछि नागपास खेलेको जस्तो गरी शेयर बजार तलमाथि गर्ने गरेको छ । यही क्रममा शेयर बजारले नयाँ रेकर्ड पनि बनाएको छ । कारोबार रकम बढ्दै गएर बुधवार ४ अर्ब पुगेको छ । नेप्सेको वृद्धि पनि जारी देखिन्छ । यस्तोमा नयाँ लगानीकर्ता फस्न सक्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ ।
हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो : हालसम्म बजार बढ्नेघट्ने कुरामा वाणिज्य बैंकहरूकै नेतृत्व चलिरहेको छ । बैंक फाइनान्सहरूले औसतमा ७ प्रतिशतले मात्र प्रगति गर्न सकेका छन् । यस्तोमा बैंकहरूको प्रगतिको आधारमा कसरी बजार बढ्छ ? बैंकहरूको बजारदर बढ्न नसक्ने थाहा पाएका प्रभावशाली लगानीकर्ताहरूले बीमातिर इशारा गर्दा यो समूह बढ्न गएको देखिन्छ । तर बीमामा पनि एनएफआरएस सिस्टम लागू भएको छ । बीमा समितिले पूँजी वृद्धि गर्ने आदेश दिएको छ । बीमा कम्पनीहरूले लाभांश वितरण गर्ने अवस्था भए पनि विविध कारणले बीमा समितिले रोक लगाएको देखिन्छ । प्रतिफल नपाउने अवस्थामा योभन्दा बढी भाउ चढ्ने अवस्था देखिँदैन ।
शेयर बजारमा नयाँ आशा पलाउनुमा नागरिक लगानीकोषले शेयर किनबेच गर्ने उद्देश्यसहित छुट्टै स्टक डिलर कम्पनी स्थापना गर्नु हो । लगानीकोषको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनेगरी नागरिक स्टक डिलर कम्पनी केही दिन अगाडिमात्र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरिएको छ । यसले गर्दा अबदेखि औपचारिक रूपमै स्टक डिलरको काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । लगानीकोषको सहायक कम्पनीको रूपमा स्थापना गरिएको उक्त कम्पनीको चुक्तापूँजी ५ अर्ब र अधिकृत पूँजी भने १० अर्बको हुनेछ । यसरी यस कम्पनीले शेयर औपचारिक रूपमा खरीदविक्री गरेर बजार निर्माण गर्नेछ । यसमा एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यस कम्पनीले खरीद गर्दा माग बढी हुन गई नेप्से केही चढ्न सक्छ । तर यस कम्पनीले शेयरहरू विक्रीमा ल्याउँदा आपूर्ति बढी भएर नेप्से फेरि घट्ने सम्भावना छ । कम्पनीले सधैं खरीद मात्रै गरिरहने कुरा सम्भव हुँदैन । समय सापेक्ष विक्री पनि गरेर नाफा कमाएर देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
भूमाफियाहरूको चलखेलमा ललिता निवासको ११४ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी किनबेच चलिरहेको पर्दाफास भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा हाले पनि प्रमुख निर्णय गर्नेहरू पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई छुटाएर भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएकोमा सोको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता पनि भएको छ ।
शेयर बजारमा नयाँ आशा पलाउनुमा नागरिक लगानीकोषले शेयर किनबेच गर्ने उद्देश्यसहित छुट्टै स्टक डिलर कम्पनी स्थापना गर्नु हो ।
यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा उक्त जग्गा बैंकहरूमा धितो राखेर ऋण लिएको पाइयो । सरकारी जग्गा भएको कारण सरकारले उक्त धितो रहेको जग्गा खोसेर लिने भएकोले धितो बैंकहरूको कब्जामा नरहने भयो । यसले गर्दा बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋण जोखिममा पर्ने देखियो । बैंकहरूमा सर्वसाधारणको लगानी भएकाले बैंकहरू डुब्दा राष्ट्रकै आर्थिक गतिविधिमा ठूलो नकारात्मक असर पर्छ । त्यसो हुँदा ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर बैंकहरूले दिएको ऋणबारे नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चिन्ता लागेको छ । यसैको फलस्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरूलाई ललिता निवासको जग्गा धितोमा रहे–नरहेको र रहेको भए के कति रहेको भन्ने जानकारी मागेको थियो । यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले धितोमा रहेका बैंकहरूलाई सम्बन्धित ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राखी उक्त रकम बराबरको रकम प्रोभिजनमा राख्न निर्देशन दिएको छ । उक्त रकम करोडौंको भएको हुनाले दुई पटक गरेर दुई वर्षमा प्रोभिजनमा देखाउनुपर्ने सल्लाह दिइएको छ । सबै रकम एकै पटक प्रोभिजनमा राख्दा बैंक नै अप्ठ्यारोमा पर्ने सम्भावना भएकाले दुई पटक गरेर प्रोभिजन गर्दा हुने सल्लाह दिइएको हो । ललिता निवासले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश पाएको ऋण जम्मा २ अर्ब ५० करोड देखिए तापनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मात्र १ अर्ब ४८ करोड भएको देखिन्छ ।
यस किसिमले ललिता निवास जग्गा प्रकरणले प्रवेश पाएका बैंकहरूले धितो शून्य भई प्रोभिजन राख्नुपर्ने हुन्छ र लाभांश वितरणमा प्रभाव पर्दा अथवा बजारमा लाभांश वितरण नगर्दा बजार मूल्यमा प्रभाव पर्न जाने हुन्छ । बैंकले नै नेतृत्व गरेको बजार भएकाले बैंकको मुनाफासँग शेयर बजारको सम्बन्ध बढी देखिन्छ । नेप्से छिट्टै ४ हजार पुग्छ भनेर प्रचार हुनुमा गलत मनसाय देखिन्छ । बजारलाई स्वतन्त्र नै छोड्नु पर्दछ । कम्पनीहरूको कमाइ अनुसार बजार आफै बढ्छ । कसैले प्रचारबाजी गर्नु जरुरी छ र ?
लेखक शेयर लगानीकर्ता एवं विश्लेषक हुन् ।
ललिता निवासमा बैंकको ऋण र शेयर बजार [२०७६ फागुन, १५]
युनिलिभरको मूल्य सबैभन्दा माथि किन ?
केन्द्रीय निक्षेपण प्रणालीको पुनःसंरचना[२०७६ चैत, १८]
[Feb 27, 2020 02:41pm]
Rini Bata next dhito linuparxa. Gov. Le pani kehi sahayog garnuparxa.
नेपाल लाइफको अनलाइन सेवा सार्वजनिक
एनएमबि बैंकद्वारा कोरोना कोषमा रू. १ करोड ५१ लाख योगदान
बैंक अफ काठमाण्डूद्वारा रू. १ करोड सहयोग
कोरोना कोषमा सेञ्चुरी बैंकको रू. ८५ लाख
गेरुवा गाउँपालिकालाई हरपल फुड्सको सहयोग